Mba Hanana Ny Fiainany Manokana ireo Panda Mena, Nakaton’i Nepal Ny Valan-Pirenena iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jolay 2015 2:29 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Türkçe, русский, bahasa Indonesia, 日本語, Italiano, عربي, English
Umi, pandà mena ao amin'ny valan'i Nogeyama . Sary tao amin'ny Flickr an'i Toshihiro Gamo. CC BY-NC-ND 2.0
Mba hahafahan'ireo pandà mena manao firaisana ara-nofo, nambaran'ireo manampahefana any an-toerana ho faritra misy fepetra ny Valam-pirenena Langtang, valam-pirenena voalohany any Nepal, faritra Himalayana ary iray amin'ireo akaiky indrindra an'i Kathmandu renivohitra.
Mikatona mandritry ny fotoana firaisain'ireo Pandà Mena ny Valam-pirenena Langtang
Tia monina aminà toerana milamina ary mora raiki-tahotra noho ny tabataba ity zavaboary iray saro-kenatra, antsoina hoe habre ao Nepal ity. Rehefa raiki-tahotra noho ny feo izy dia vitany mihitsy aza ny mandao ireo madinika ary lasa izy mandositra. Koa satria manomboka ny tapaky ny volana Jona ny fotoana firaisana ho an'ireo Pandà mena, nakatona tsy ho azo tsidihana aloha ilay valam-pirenena ary na ny fanangonana kitay fanaon'ireo mponina manodidina aza dia voaràra ao anatin'ny roa volana.
Miaraka amin'ireo 10.000 sisa tavela maneran-tany, manodidina ny 1.000 eo ho eo ireo pandà mena hita any amin'ireo faritra vala arovana ao Nepal – manomboka ao amin'ny Faritra Fitahirizana ao Kanchenjunga any atsinanan'ny Valam-pirenena Makalu Barun sy ny Faritra manasaraka, ny Valam-pirenena Sagarmatha sy ny Faritra manasaraka, ny Valam-pirenena Langtang sy ny Faritra manasaraka, ny Faritra Arovana ao Manaslu, ny Faritra Arovana ao Annapurna, ny Tahiry misy ny biby fihaza ao Dhorpatan sy ny Valam-pirenena Rara ary ny Faritra manasaraka any andrefana. Ankoatra an'i Nepal, hita any amin'ireo faritra an-tendrombohitra any Indi,Shina, Bhutan, Myanmar sy Laos ireny biby ireny.
Ny pandà mena, antsoina ihany koa hoe, amboahaolo afo, dia hita ampolotaona vitsy talohan'ny panda goavana. Mpihinankena lasa mihinana ahitra izy io ary tsimoka sy ravinà volotsangana mbola tanora no tena fihinany.
Remember, the red panda is the original panda! 🙂 https://t.co/WNLqKxwn3P
Tadidio, ny pandà mena no niandohan'ny pandà! (pandà orizinaly)
Na ilay zavaboary saro-kenatra aza no nalaina natao ho fangon'ny Mozilla Firefox ary an-tapitrisa ireo fitety aterineto no mampiasa azy isanandro, vitsy monja no mahafantatra hoe pandà mena anie izy io.
Pandà mena fa tsy amboahaolo ny fangon'ny Firefox raha ny tena marina
Tafiditra anatin'ny lisitr'ireo biby tandindonin-doza ny pandà mena hoy ny International Union for Conservation of Nature (IUCN) – Fikambanana Iraisampirenena Ho Fitahirizana ny Natiora. Na dia tsy hazaina loatra aza ny pandà mena, dia voan'ireo fandrika natao ho an'ny diera fakàna ‘musc‘ sy ireo bibidia hafa izy ireny. Manelingelina sy manimba ny toeram-ponenan'ireo pandà mena ireo mpiompy ‘chauris’, taranaka avy amin'ny fampivadiana yak (omby tibetàna) sy omby vavy, na dia tsy fanahy iniany aza. Ho an'ireo mpikatroka amin'ny fitahirizana dia olana iray goavana ny fahaverezan'ny toeram-ponenana.
Ny governemanta Nepale, miaraka amin'ny WWF, fikambanana mpiaro ny fiainana miriaria, dia nampiditra ireo vondrom-piarahamonina eny an-toerana ho ao anatin'ny fitahirizana ity karazam-biby ao Langtang ity. Toy izany koa, hatramin'ny 2007 ny tambajotra ho an'ny Pandà Mena dia miasa hatrany miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina mba hanaraha-maso sy hitahirizana ireo pandà mena.
Hanome tontolo feno filaminana ho an'ireo pandà mena sy hahafahany miray ny vanim-potoana misy fepetra natao ao amin'ny Valam-pirenena Langtang hatramin'ny tapaky ny Aogositra. Fotoana fohy aorian'izay, ho ankalazaina ny 19 Septambra ny Andro manerantany ho an'ny Pandà Mena, hampakàrana ambonimbony kokoa ny fanentanana ho fitahirizana azy io.